Real Bike Racing 1.0.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.9 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Real Bike Racing
Real Bike Racing ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
, အင်ဂျင် Start ဓာတ်ငွေ့ထိမှန်ပြီး 200 HP ကသားရဲ၏ကိုင်တွယ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ချန်ပီယံအနိုင်ရမှအထက်တန်းလွှာမြင်းစီးသူရဲနှင့်အတူဘန်ပါမှဘန်ပါသွားပါ။ အခုတော့ adrenaline အဘို့အဆင်သင့်ရပြိုင်ကား action ကိုလောင်စာနှင့်လူအပေါင်းတို့၏အလျင်မြန်ဆုံးလမ်းသွားအတွက်အောင်ပွဲရန်သင့်လမ်းစီး!
- ထူးခြားတဲ့အထူးဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ၏ 10+ အမျိုးအစားဘီးကိုယူ
- ပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူရှိအတိုငျး 3D ဂရပ်ဖစ်
- က Google Cardboard & စသည်တို့ကိုပံ့ပိုးသော VR mode ကို (virtual reality)
Real Bike Racing အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Real Bike Racing အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Real Bike Racing အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Real Bike Racing အား အခ်က္ျပပါ
hot105 စတိုး 5.65k 1.36M
Real Bike Racing ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Real Bike Racing အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.9
ထုတ်လုပ်သူ Italy Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.italy-games.com/policy.htm
Release date: 2019-07-01 11:42:30
လက်မှတ် SHA1: 9D:BF:6C:E1:DE:F6:BC:A7:FF:78:01:36:0D:C8:C0:7B:48:1E:B6:91
ထုတ်လုပ်သူ (CN): FruitsMobile
အဖွဲ့အစည်း (O): FruitsMobile
Real Bike Racing APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ